कसले सार्वजनिक गरेको थियो मलैका र अर्जुन कपुरको सम्बन्धको रहस्य ? – PanchKhal Online
Home/मनोरंजन/कसले सार्वजनिक गरेको थियो मलैका र अर्जुन कपुरको सम्बन्धको रहस्य ?
कसले लगायो अरबाजको जीवनमा आगो ? अर्जुन कपुर बलिउडमा डेब्यु गर्ने तयारीमा रहेका थिए । उनी यसै कारण पनि खान परिवारको घरमा आउने जाने गर्थे ।
त्यस समय सलमान खानकी बहिनी अर्पिता खानसँग अर्जुन कपुरले डेट गरिरहेका थिए । उनीहरुबीच सम्बन्ध ठिकठाकै चलिरहेको थियो । तर, अर्जुनले अरबाज खानकी श्रीमती मलैकासँग सम्बन्ध विस्तार गरिसकेका थिए ।
उनले मलैकासँग बोलीचाली केही ज्यादा नै गर्न थालिसकेका थिए । बाहिर गाइगुइ हल्ला चलेता पनि घरमा भने सबै बेखबर रहेका थिए । तर, जब अर्जुनले अर्पितासँग ब्रेकअप गरे तब मिडियामा अर्जुन र मलैकाको सम्बन्धबारे राजीव मसन्दले कसैको पनि नाम नलिई सबै कुरा छरपष्ट पारिदिए । त्यसपछि खान परिवारमा झै झगडाको वातावरण सुरु हुन पुग्यो ।
अरबाज र मलैकाको सम्बन्ध मिलाउन सलमान खानले अहम भुमिका खेलेका थिए । उनले अर्जुनलाई बलिउडबाट ब्बोइकट नै गर्ने धम्की दिए । तर, उनको प्रयास सफल हुन सकेन । अन्ततः मलैका र अरबाजले १८ वर्ष लामो वैवाहिक सम्बन्धलाई टुग्याउने निर्णय लिए । डिभोर्स लगत्तै अर्जुन र मलैकाको सम्बन्ध छताछुल्ल भयो ।
उनीहरु खुलेआम नै एक अर्कालाई डेट गर्न थाले । केही बलिउड कलाकारहरुले त उनीहरु विवाहको तयारीमा समेत रहेको बताए । प्रियंका चोपडाले उनीहरु विवाहको तयारी गरेको समेत बताएकी थिइन् । पछिल्लो समय उनीहरुले माल्दिभसमा बिदाइ मनाएको तस्बिरहरु सामाजिक सञ्जालमा भाइरल नै भयो ।
मलाई कोही केटीले पत्याएनन्’ : राजेशपायल राई
तस्वीर लिक भएपछि यसरी जंगिए दबंग ब्वाई सलमान